Xukuumadda oo beenisay in ciidan Soomaaliyeed ka dagaal galeen Tigray | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xukuumadda oo beenisay in ciidan Soomaaliyeed ka dagaal galeen Tigray
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe ayaa si kulul u beeniyay wararka sheegaya in Ciidamada Somaliya ay ka dagaalameen Gobolka Tigray ee Waqooyiga Itoobiya.
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa suuqa soo galay warar sheegaya in Ciidamo Soomaaliyeed lagu dilay Gobolka Tigray, xilli ay ka barbar dagaalamayeen Ciidamada Itoobiya. Ciidamadan ayaa la sheegay inay yihiin kuwo ay sanadkii hore Dowladda Federaalka tababar ugu dirtay dalka Eritrea.
Wasiirka Warfaafinta oo ka soo muuqday Telefishinka Qaranka ayaa yiri “Waxaan halkan dowlad ahaan ka cadeyneynaa wararka kutiri kuteynta ee been abuurka ee mala awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga, ee ah in Ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u joogga wadamada dibaddu ay ka dagaal galeen Waqooyiga Itoobiya iyo Tigray, inaanay wax ka jiraa haba yaraatee jirin.”
Wasiirka ayaa markale yiri “Ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay Dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaan halkan ku cadeynaya sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo joogga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kaloo dagaal.”
Wasiirka ayaa soo hadalqaaday warar been abuur ahaa oo horaan sidaan oo kale looga faafiyay Ciidanka Qaranka, oo sheegayay inay ka dagaalameen dalalka Libya iyo Azerbaijan, sidaasi oo kalena uu u beenoobi doono warkan ugu dambeeyay.
“Horey ayaa loo fidiyay dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Libya iyo Azerbaijan. Sidii ay u beenoobeen ayay kuwa Waqooyiga Itoobiya iyo Tigray-na aan ugu cadeyneynaa shacabka inay yihiin been iyo mala awaal.” Ayuu yiri Wasiir Dubbe.
Wasiirka oo baaq u jeedinayay siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta ayaa yiri “Waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta ka ganacsanaya caloosha iyo qalbiga hooyada Soomaaliyeed ee wiilkeedu u dhaartay difaaca dalka, tababarkana uu ugu maqan yahay. Waxaan rabaa inaan iraahdo hooyooyinkeena hurdada haka kicinina, siyaasaduna ma gasho kicinta hooyooyinka, dacaayadda iyo beenta. Kuwii hore ee la sheegay ayaa beenoobay, maalin walbaa in been la sheegaa waxay hagardaamo ku tahay qalbiga hooyada Soomaaliyeed.”
Dubbe ayaa hadalkiisa ku soo gunaanuday “Ugu dambeen shacabka Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa inay ku kalsoonaadaan dowladooda, isna barbar taaggaan ciidankooda.”
Previous articleWasiir Waayeel: Xitaa Ahlu Sunna markii ay joogtay Shabaabku way soo weerarayeen magaalooyinka
Next articleMadaxweyne Guudlaawe oo Muqdisho kula kulmay Cali Mahdi (SAWIRRO)